जिल्ला अस्पतालमा बिरामीको चाप, नि.शुल्क औषधिको अभाव - Naya Patrika
जिल्ला अस्पतालमा बिरामीको चाप, नि.शुल्क औषधिको अभाव
नवीन केसी, अर्घाखाँची, २८ साउन | साउन २८, २०७४
जिल्ला अस्पतालमा बिरामीहरूको चाँप बढेको छ । मौसममा आएको परिवर्तनसँगै भाइरल ज्वरोका कारण बिरामीहरूको संख्या बढेको जिल्ला अस्पतालका प्रमुख डा. जगन्नाथ तिवारीले बताए ।
१५ बेड स्वीकृत जिल्ला अस्पतालमा अन्य क्षेत्रको सहयोगमा १५ बेड थप गरेर ३० वटा बनाएको प्रमुख तिवारीले बताए । ‘अहिले अस्पतालमा ४५ जना बिरामी भर्ना गरेर उपचार लिइरहेका छौँ, मौसम परिवर्तनका कारण ज्वरो, टाइफाइट, भाडापखालाका बिरामी बढिरहेका छन् । तर, बेडअभाव भएपछि भुईंमा राखेर बिरामीको उपचार गरिरहेका छौँ ।’
गुल्मी जिल्लाको मदाने गाउँपालिकाबाट छोराको उपचारका लागि सन्धिखर्क अस्पताल आएकी ४० वर्षीया सीमा नेपालीले भनिन्, ‘छोरालाई एक महिनादेखि ज्वरो आएको थियो । गाउँको स्थानीय मेडिकलमा जचाएर औषधि खुवाएँ ।
ज्वरो नघटेपछि भर्ना गरेर उपचार गराइरहेकी छु । तर, बेड सानो भएकाले निकै गाहे भएको छ । बेड अभाव भएपछि जिल्ला अस्पतालमा बिरामी कुरुवाका लागि राखिएका लो–बेडहरू राखेर उपचार भइरहेको छ ।
जिल्लाभर औषधिको अभाव
स्थानीय तहको संरचना परिर्वतन भएसँगै जिल्लाका ४१ वटा स्वास्थ्य संस्थामा औषधिको अभाव भएको छ । नयाँ बजेटमा गाउँपालिकामा तीन लाख र नगरपालिकामा पाँच लाख रुपैयाँको औषधि खरिद गर्ने भनेर बजेट सिलिङ पठाए पनि औषधि खरिदमा अन्योल उत्पन्न भएको छ । जिल्ला अस्पताल अर्घाखाँचीमा सबै प्रकारका निःशुल्क औषधिहरू उपलब्ध हुनसकेका छैनन् ।
७० प्रकारका निःशुल्क औषधि पाइनुपर्ने भए पनि यहाँ ४० प्रकारका औषधि मात्र पाइन्छ । औषधि नपाउँदा बिरामीहरुले राज्यले दिएको सेवा उपयोग गर्न पाएका छैनन् । औषधि उपलव्ध नहुँदा गरिव बिपन्न वर्गका नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा मर्कामा पर्ने गरेका छन् ।
जिल्ला अस्पतालका प्रमुख डा. जगन्नाथ तिवारीले अत्यावश्यक औषधिहरू उपलब्ध भए पनि केही औषधि अस्पतालमा नभएको बताउँछन् । ‘थाइराइड, प्रेसर, सुगरका केहि औषधि उपलब्ध छैनन्,’ उनले भने, ‘औषधिमाथिबाटै नआएकाले समस्या परिरहेको छ ।’
जिल्ला अस्पतालमा सरकारले उपलब्ध गराउने सबै प्रकारका औषधि कहिल्यै पनि उपलब्ध नभएको पाइएको छ । ‘जिल्ला भरबाट औषधि अभाव हुन लाग्यो भनेर फोन आउन थालेको छ ।
हामीले पनि क्षेत्रमा माग गर्ने हो क्षेत्रमा भन्दा गाउँपालिका र नगरपालिकासँग समन्वय गर्नुस् भनेर जवाफ आएको छ । केन्द्रले पनि यसपटक औषधि खरिद गरेको छैन । कसरी औषधि खरिद गर्ने हो अन्योल उत्पन्न भएको छ,’ डा. तिवारीले भने ।
जिल्ला अस्पतालमा गत वर्षको स्टक रहेका सिटामोल, जीवनजल जस्ता औषधि भने सबै स्वास्थ्य संस्थामा पठाएको अस्पतालका स्टोरकिपर मदन भट्टराईले बताए ।